Sergio Busquets oo shaaciyey horyaalka uu ku biiri doono marka uu ka tago kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 23 Abriil 2019. Sergio Busquets waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka tagi doono kooxda Barcelona, waxaana uu xusay horyaalka uu jecel yahay inuu ka dheelo marka uu ka tago Barca.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Spain oo muddo dheer kooxdaas u ciyaarayey, isla markaana u saftay in ka badan 500 oo kulan tan iyo markii uu xirtay maaliyadda Barca markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay bishii September sanadkii 2008 ayaan qarin horyaalka uu jecel yahay inuu aado marka uu ka tago kooxdan.
Busquets waxa uu xubin muhiim ah u noqdo kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ernesto Valverde, waxaana la isticmaalay oo uu ciyaaray 31 ka mid ah 34 kulan oo horyaalka La Liga la dheelay xilli ciyaareedkan.
Barca ayaa heshiis kala gaartay kooxda Ajax ciyaaryahan Frenkie de Jong waxaana uu ku soo biiri doonaa xagaaga, yeelkeede waxaa shaki la galiyey inuu waqti badan ciyaari karo Busquets.
Marka uu ka tago garoonka Camp Nou waxa uu Busquets oo 30 sano jir ah shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu xirfaddiisa ciyaareed u weeciyo horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer kaasoo loo soo gaabiyo MLS.
Sergio Busquets ayaa saxiixay heshiis cusub oo shan sanadood ah bishii September ee la soo dhaafay waxaaana qandaraaskaan lagu burburin karaa adduun dhan 445 milyan oo gini.